Nahoana No Lasa Teny Japoney Malaza Indrindra Ho An’ny Taona 2014, Ny Hoe ‘Filàm-baniny Amin’ny Fiterahana’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2014 17:12 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, 日本語
Sary avy amin'i tasha, mpampiasa Pixabay. Creative Commons Deed CC0
Isan-taona, mamoaka ny Teny Japoney Malazan'ny Taona, nosafidiana tao anatin'ny lisitr'ireo 50 notsongaina, ny U-Can, Japoney mpanonta ho an'ny resaka fanabeazana. Maro tamin'ireo nandresy tamin'ity taona ity no maivana, fa tao anatin'ireo teny malaza folo voalohany ho an'ny taona 2014, anefa, dia nisy ilay teny mavesatra be hoe “mata hara” (マタハラ), midika hoe filàm-baniny amin'ny fiterahana.
Tao am-bavan'ny maro tany Japana ilay teny hatramin'ny nanapahan'ny Fitsaràna Avon'ny firenena ny Oktobra 2014 fa manitsaka lalànan'ny asa mira lenta any Japana, ny fanapahan-kevitry ny hopitalin'i Hiroshima hampidina kilasy ilay vehivavy “physiotherapist” (mpitsabo). Notorian'ilay physiotherapist ary nitakiany onitra mitentina 1,7 tapitrisa yen (mitovy lanja amin'ny 17.000 Dolara Amerikana) ilay hopitaly.
Ny 23 Oktobra, nolavin'ny Fitsaràna Avo ny fitorian'ilay mpitsabo, ary nofoanany ihany koa ireo valim-pitsaràna teo aloha nomen'ny fitsaràna ambaratonga voalohany , ary namerina ilay raharaha hiverina hatrany ifotony any amin'ny fitsaràna avo any Hiroshima, izany hoe nandidy ny fitsaràna hanova ny valim-pitsaràny.
Araka ny didy navoakan'ny Fitsaràna Avo ny 23 Oktobra, “ho toy ny fotokevitra fototra, tsy afaka mampidina kilasy ny mpiasa vavy ny mpampiasa raha tsy nisy fifanarahana momba ny fitondràna vohoka.” Nanatsimbadika ireo didy navoakan'ireo fitsaràna roa ambaratonga voalohany izany.
【マタハラ訴訟】妊娠降格は「承諾なければ原則違法」　最高裁初判断 http://t.co/qbn0B0o0Ct pic.twitter.com/GElAVGH2GB
Fitoriana “Mata hara“: fampidinana kilasy noho ny maha bevohoka nodidian'ny Fitsaràna Avo ho tsy manara-dalàna
Resahana ny Filàm-baniny amin'ny Fiterahana rehefa misy vehivavy iray mpiasa, izay bevohoka na avy niteraka, ka nampidinina kilasy, nahazo fihenan-karama, nomena sazy hitsahatra amin'ny asa ao anatin'ny fotoana voafetra tsy handraisan-karama, na miaina fitondràna ratsy hafa ataon'ny mpampiasa azy. Tato anatin'ny taona maromaro farany, na dia nihatsara kely aza ny satan'ny vehivavy tao anatin'ny fiarahamonina Japôney, nihanitombo io karazana sotasota io.
Afaka jerena ao amin'ny Aterineto ny karazan-kevitra momba ilay didy tamin'ny 24 Oktobra:
同意なしの妊娠降格違法　マタハラ訴訟で最高裁初判断 http://t.co/RidEgNCZ4W 「妊娠がきっかけの降格は、自由意思に基づき女性が明確に同意した場合や、事業主側に特段の事情がある場合をのぞき、違法で無効」 ⇒うん。メチャクチャ納得できる。　腹に落ちる判決だね。
“ho toy ny fotokevitra fototra, tsy afaka mampidina kilasy ny mpiasa vavy ny mpampiasa raha tsy nisy fifanarahana momba ny fitondràna vohoka.”
- Eny! miombon-kevitra tanteraka amin'izany aho. Zavatra mitombina tsara izany.
Ny sasany naneho ny heviny momba ilay teny malaza mata hara :
Ny olana amin'ny “filàm-baniny amin'ny fiterahana” dia, raha tokony homena ny reny bevohoka daholo ny zavatra ilainy rehetra, etsy ankilany kosa, ahoana ny momba ny hoe “te-hanana asa maivamaivana kokoa aho, kanefa tsy hiala eo amin'ny toerana maha mpitantana ahy. Ary te-hody aloha aho sady tsy miova ny karamako.” Ny vokatr'izay avy eo, voatery manohy ny asanao ireo olona hafa. Toy ny hoe “ny lafiny ambadiky ny filàm-baniny amin'ny fiterahana” no tena hita mihatra.
Ny sasany indray niompana bebe kokoa tamin'ny hoe inona no mety ho vokatr'ilay fanapahan-kevitra eo amin'ireo Japôney mpampiasa :
Mitondra fiovàna lehibe ilay didy momba ny “filàm-baniny amin'ny fiterahana” ary hisy fiantraikany lalina eo amin'ny seraseran'ny asa. Nikkei Shimbun: “Maanodina ho ambony ambany ny adihevitra lehibe eo amin'ny fiarahamonina ilay didy Mata hara. Tranga mihoatra ny 3.000 no mbola eo am-piandrasana.”
Ireo sasany mandroso hevitra hoe mety hanampy amin'ny fanovàna ny kolontsaina Japôney amin'ny fiasàna diso tafahoatra ilay didy mata hara, izay manery ireo mpiasa hiasa alina be:
Ao tsara ity: RT ny toeram-piasàna ao Japana, mifototra amin'ny fiasàna mandritra ny ora lava dia lava hatrizay, dia mety hiova ho an'ny lahy sy ny vavy. Tsy resaka momba ny fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy ny mata hara, fa kosa tendron'ny ranomandry lehibe mitsingevana izay ny tontolon'ny asa feno poizina ao Japana.
Nisy adihevitra maro momba ny dikan'ilay didin'ny Fitsaràna Avo ho an'ireo mpiasa maro any Japana, miasa aminà ampaham-potoana ary ireo manana fifanarahana anatin'ny fotoana fohy.
Hatrizay, raha oharina amin'ireo firenena G7 hafa, vehivavy vitsy tao Japana no nandray anjara tamin'ny asa mafy.
Ankehitriny, satria miha-antitra i Japana, nantsoina handray anjara mavitrika amin'ny mponina afaka miasa ao amin'ny firenena ireo reny amin'ny maha vondrona azy. Araka ny Minisitry ny Asa ao Japana, tao anelanelan'ny 2005 sy 2009, 38 isan-jaton'ireo reny no nanohy miasa taorian'ny niterahany ny zanany voalohany. Any amin'ny taona 2020, manantena ny hampitombo io isa io ny Minisitra mba hihoatra ny 55 isan-jato.
Ny 15 Oktobra 2014, nilaza ny Minisitry ny Asa hoe tafiditra ao anatin'ny fandinihana lalina ny resaka filàm-baniny amin'ny fiterahana izy.
Izao no nandrasana hitranga, noho ilay didy vao haingana avy amin'ny Fitsaràna Avo, ho voatery hijery ary hiatrika ny olan'ny mata hara ireo Japôney mpampiasa.
Mandritra izany fotoana izany, ho jerena ihany koa ny olan'ny fiasàna mandritra ny ora lava loatra ary ireo mpiasa miasa diso tafahoatra. Afaka manamboatra tontolon'asa tsaratsara kokoa na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy ilay didy mata hara, sady mampiditra vehivavy maromaro kokoa ao anatin'ny sehatry ny asa, ary afaka hampitombo ny tombom-barotra ho an'ny asa fandraharahàna ihany koa.